Momba anay - Xinxiang City Chengxin Vibration Equipment Co., Ltd.
Xinxiang City Chengxin Vibration Equipment Co., Ltd.dia matihanina mpanamboatra fitaovana hovitrovitra sy milina fitrandrahana harena ankibon'ny tany any Sina. Ny orinasanay dia miorina ao amin'ny faritra fampandrosoana ny toekarena Xiaoji, Tanànan'i Xinxiang, faritanin'i Henan, izay misy velarana 80,000 metatra toradroa ary velarana 60000 metatra toradroa. Niorina tamin'ny 2003 ny orinasa miaraka amin'ny renivohitra voasoratra 58 tapitrisa yuan. Mampifandray ny R&D, ny endrika, ny famokarana ary ny varotra izy io. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny metallurgy, harena ankibon'ny tany, arintany, simika, akora fananganana, herinaratra, injeniera amin'ny arabe sy tetezana ary indostria hafa. Amin'izao fotoana izao, ny orinasanay dia manana mpiasa maherin'ny 500 ary teknisiana mihoatra ny 80. Ny orinasanay dia tsy vitan'ny orinasan-teknolojia avo lenta amin'ny faritany, orinasa mpampindram-bola AAA, fifanarahana amin'ny faritany ary orinasa azo itokisana avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Siansa sy Teknolojia any Henan, fa nandalo ihany koa ny fanamarinana ny rafitra kalitao ISO sy ny fanamarinana CE voatery ho an'ny vokatra ampiasaina amin'ny ny UE.
Chengxin Vibration dia lasa orinasa an'ohatra amin'ny indostria ankehitriny ary neken'ny mpanjifa maro. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, nanorina fifandraisana be dia be amin'ny orinasa metallurgical, arina ary orinasa mpamokatra herinaratra elektrika ny orinasa, toa ny Wuhan Iron and Steel, Baosteel, Capital Iron and Steel, Jianlong Group, Jiuquan Iron and Steel, Yanshan Iron and Steel, Ganglu , sy Hanye. Ankoatry ny famatsiana orinasa lehibe eto an-toerana, ny Chengxin Vibration dia manondrana any Vietnam, Bulgaria, Abu Dhabi, Indonezia, Torkia, Botsoana, Zambia, Kambodza, Goatemalà ary faritra hafa koa. Ny orinasa dia nanangana masoivoho varotra sy serivisy teknika manerana ny firenena, mamorona tambajotra varotra manana fahaiza-manao fampandrosoana matanjaka sy rafitra fitantanana feno.
Nandritra ny taona maro, ny Integrity Vibration dia nahatratra mari-pahaizana avo lenta, mandeha ho azy ary faharanitan-tsaina amin'ny famolavolana sy famokarana vokatra. Mandritra izany fotoana izany dia nametraka rafi-pamokarana sy fitantanana asa miompana amin'ny tsena izay manatsara ny fiasan'ny lojika, ny renirano ary ny fikorianan'ny fampahalalam-baovao, ary nahatratra tombony ara-toekarena tsara. Ankehitriny, ny tombontsoa ara-toekarena feno an'ny orinasa, ny fikarohana siantifika sy ny teknolojia ary ny tanjaka fampandrosoana, ary ny fifaninanana eo amin'ny tsenan'ny vokatra dia anisan'ny lohalaharana amin'ny indostrian'ny indostrialy.
Ny vokatra lehibe novokarin'i Chengxin Vibration dia misy sokajy enina: efijery mihetsiketsika, mpampita hafatra, mpamaky fiara, motera mihetsiketsika, mpanentana hovitrovitra ary kojakoja vokatra samihafa. Ireo vokatra ireo dia namorona andiany maherin'ny 20 miaraka amin'ny famaritana 400 mahery.
• Sarimihetsika mihodina: efijery avo lenta avo lenta, efijery fiarovana miaro ny tontolo iainana, efijery feeder miaro ny tontolo iainana, efijery mihetsiketsika boribory, efijery mihetsiketsika mivantana, efijery mihetsiketsika sandry mangatsiaka, efijery mangatsiaka / mafana, fantsona matevina mitovy habe, takelaka vovoka arintany, roller efijery, efijery zezika, efijery dewatering, efijery miolaka, efijery sinusoida, efijery fialana sasatra CZS, efijery amponga GTS.
• Feeder: feeder vibrant karazany roa an'ny CZG, feeder vibrant electromagnetic, belt / feeder chain, feeder charger recrocating, feeder disk qualité CYPB, milina fitrandrahana fikafika FZC, conveyor Screw, conveyor chain, conveyor vibration, conveyor fehikibo, elevator bucket.
• Crusher: crusher martin peratra, crusher azo ovaina, crusher cone, crusher effet
• Sombim-bahaolana: vibrator amin'ny rindrin'ny trano fitehirizana, fanentanana fanamafisam-peo miorina amin'ny karazan-tseza, fehin-kibo matevina fanamafisam-peo, motera mihetsika, vibrator roa-axis, ary kojakoja vokatra hafa.
Hatramin'ny niorenany, ny Integrity Vibration dia nametraka hatrany ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny teknolojia amin'ny toerana voalohany, ary miaraka amin'izay koa dia miompana amin'ny tsena ary mivoatra mavitrika amin'ny fikarohana sy fampandrosoana. Amin'izao fotoana izao, ny andrana mivantana sy ny andrim-pikarohana Chengxin Vibration dia mihoatra ny injeniera sy teknisianina 80 mahery. Amin'ny alàlan'ny fampidirana teknolojia sy fanovana ara-teknolojia ny orinasa dia nanamafy ny fiaraha-miasa ara-teknika amin'ireo oniversite fanta-daza fanta-daza ary nanangana ivon-toerana fikarohana sy fampandrosoana ho an'ny orinasa. Ny orinasa dia manangona mihoatra ny 10% ny tombom-barotra ao amin'ny foibem-pikarohana siantifika isan-taona, ary ny vola rehetra dia ampiasaina hampivelarana ny teknolojia, noho izany ny ivon-toerana fikarohana dia manana vola ampy.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy niainan'ny asa, niaraka tamin'ny haitao mandroso ao an-trano sy any ivelany, ny Chengxin Vibration dia namolavola efijery mahomby marobe, efijery malefaka tontolo iainana ary tabilao mpamatsy tontolo iainana mifanaraka amin'ny filan'ny tsena. Mandritra izany fotoana izany, ny sary rehetra an'ny orinasa dia tantanan'ny rafitry ny fitantanana angona PDM, izay mahatsapa ny fifanakalozam-baovao amin'ny famolavolana, fitantanana ary famokarana, manatsara ny fahombiazan'ny asa ary manafaingana ny firoboroboan'ny vokatra.
Nandritra ny taona maro, ny orinasa dia nahazo ny fanohanana sy ny fahatokisan'ny mpanjifa maro mifanaraka amin'ny fehezan-kevitry ny "Mitondrà mpanjifa amin'ny finoana tsara, miaraka amin'ny vokatra lavorary hahazoana ny fahatokisan'ny mpanjifa", ny vokatra dia amidy manerana ny firenena ary amidy ampitan-dranomasina, ary efa noraisina tamim-piraisan-kina!
Ny fahamarinana dia manangana ny marika, ny fanavaozana manangana ny ho avy.
Andraikitra ara-tsosialy orinasa
1. Ahiahy ho an'ny fiaraha-monina
• Manomeza zavatra amin'ny toerana ilana ara-potoana mba hamerenany ny fiarahamonina.
• Vahao ny ampahany amin'ny olan'ny asa.
2. Fikarakarana ny tontolo iainana
• Manambola vola be mba hampiroboroboana ny fampandrosoana ny tontolo iainana. teknolojia fiarovana, ary mandray anjara amin'ny fanatanterahana ny fampandrosoana maharitra.
• Mamaly ny antso nasionaly hampiasa angovo madio sy hitsitsiana ny harem-pirenena.
1. Mampiasà fomba fitantanana 6S hahazoana antoka fa ny tontolon'ny asa an'ny. madio sy mahomby ny mpiasa.
2. Manamafy ny fiaraha-miasa amin'ny oniversite, manatsara ny kalitaon'ny vokatra ary miaro ny tombotsoan'ny mpividy.
3. Fitsinjaram-pahefana ho an'ny mpiasa mandritra ny fialantsasatra.